02.၂။ သတင်းရေးသားခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများ - 24h dans une rédaction
သတင်းစာသည် စုစည်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ်၏ ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းခန်းအစည်းအဝေးသည် သတင်းစာဆရာများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စုစည်းထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆွေးနွေးသော အစည်းအဝေးဖြစ်ပါသည်။ ဤဆွေးနွေးမှုတွင် အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သော ရည်မှန်းချက်များ ပါရှိပါသည်- သတင်းစာအကြောင်းအရာကို စီစဉ်ရန်၊ ထိုအကြောင်းအရာကို ထုတ်ဝေမှုအတွက် စုစည်းရန်နှင့် ၎င်းတို့ တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်အလို့ငှာ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဆန်းစစ်ရန်။ ထို့ကြောင့် သတင်းခန်းအစည်းအဝေးကို သတင်းစာများအားလုံးနှင့် ထုတ်ဝေမှုများအားလုံး၏ အချိန်ဇယားများတွင် ကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။
၁။ လက်ရှိကိစ္စရေးရာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သော သတင်းခန်းအစည်းအဝေး။ နေ့စဉ်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာများသည် နောက်တစ်နေ့ထွက်မည့် သတင်းစာ၏ အကြောင်းအရာကို စီစဉ်ရန် မွန်လွဲပိုင်းအချိန်တိုင်းတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ၎င်းတို့၏ စာမျက်နှာတစ်ခုစီအတွက် “ယာယီသတင်းစု” ကို ရေးဆွဲပါသည်- ဆောင်းပါးအရေအတွက်၊ ဆောင်းပါးများ၏အမျိုးအစား၊ ဆောင်းပါးများ၏အရှည်၊ ဆောင်းပါးများ၏အစဉ်လိုက်၊ ရုပ်ပုံထည့်သွင်းဖော်ပြမှုများ။
ကော်လံ ၆ ခုပါသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက် “ ယာယီသတင်းစု” ဥပမာမှာ- X ၏ သတင်းပေးပို့ချက် ၁ ခု… (ကော်လံ ၃ ခု)၊ ဆွေးနွေးနေသည့် သတင်းပေးပို့ချက် ၁ ခု + Y ၏ တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့ထားမှု ၁ ခု… (ကော်လံ ၂ ခု)၊ သတင်းတိုအကြောင်းအရာများ၏ စီးရီး ၁ ခု (ကော်လံ ၁ ခု)။
၂။ လက်ရှိကိစ္စရေးရာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းအား စီစဉ်ရန်ဖြစ်သော သတင်းခန်းအစည်းအဝေး။ နေ့စဉ်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာများသည် နောက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေမည့် သတင်းစာ၏ အကြောင်းအရာကို စီစဉ်ရန် နံနက်ခင်းအချိန်တိုင်းတွင် အစည်းအဝေးလုပ်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် “အဆုံးသတ်သတင်းစု” ဖြစ်လာမည့် “အထွေထွေသတင်းစု” ကို ဖော်ဆောင်ရန် ၎င်းတို့ထဲတွင် အလုပ်တာဝန် ခွဲဝေပါသည်- ဆောင်းပါးများစာရင်း၊ စာရေးသူများ၏အမည်၊ ဆောင်းပါးတစ်ခုစီပေါ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသောအရှည်။
ကော်လံ ၆ ခုပါသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက် “ အဆုံးသတ်သတင်းစု” ဥပမာမှာ- X ၏ သတင်းပေးပို့ချက် ၁ ခု… (စာသား၏ ၂ ၁/၄ ကော်လံ + ဓာတ်ပုံ၏ ၃/၄ ကော်လံ)၊ ဆွေးနွေးနေသည့် သတင်းပေးပို့ချက် ၁ ခု (၁ ၁/၂ ကော်လံ) + Y ၏ တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့ထားမှု ၁ ခု… (၁/၂ ကော်လံ)၊ သတင်းတိုအကြောင်းအရာများ ၄ ခု- တရားမျှတမှု၊ ရဲ၊ သတင်းစု၊ အမှားပြင်ဆင်ချက် (ကော်လံ ၁ ခု)။
၃။ လက်ရှိကိစ္စရေးရာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းအား စဉ်းစားရန်ဖြစ်သော သတင်းခန်းအစည်းအဝေး။
မိမိဘာသာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားသည့်အပြုအမူဖြင့် ပြီးခဲ့သောလများတွင် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ရန်အတွက် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နောင်လာမည့်သတင်းအကြောင်းအရာများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် တာဝန်ယူမည့် အယ်ဒီတာများနှင့်ဆိုင်သော ရာထူးများပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားရန် ၎င်းတို့အားလုံး စုစည်းရန်အတွက် နေ့စဉ်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာများသည် ပုံမှန်အချိန်အပိုင်းအခြားများတွင် – ဥပမာ၊ သုံးလတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ခြောက်လကြာတိုင်း – တွေ့ဆုံရန် အချိန်ပေးကြပါသည်။ ထိုနောက်တွင် သတင်းခန်းအစည်းအဝေးသည် ရှင်းလင်းတိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် သတင်းစာ ဒါရိုက်တာ၊ တည်းဖြတ် ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် အယ်ဒီတာချုပ်၏ ကနဦးစတင်မှုဖြင့် စည်းဝေးလုပ်ဆောင်မည့် သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းကော်မတီ ဖြစ်လာပါသည်။
က။ “ အာရပ်နွေဦး” ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု။
ခ။ မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း။
ဂ။ သတင်းစာအနေဖြင့် နောင်လာမည့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဘက်တွင် ပါဝင်သင့် မပါဝင်သင့်။
နေ့စဉ် သတင်းစာထုတ်ဝေခြင်းသည် နေ့စဉ် အချိန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေရခြင်းနှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူပါသည်။ အချိန်ရရန်၊ သတင်းစာဆရာများသည် ယခင်နေ့ကတည်းက ၎င်းတို့ပြင်ဆင်ထားသော သတင်းများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မည့်ပုံစံကို အဆုံးသတ်ရန် သတင်းခန်းအစည်းအဝေးအတွင်း မတ်တပ်ရပ်၍နေကြပါသည်။ ၎င်းတို့ ဘာဖြစ်လို့ မတ်တပ်ရပ်နေရတာပါလဲ။ မတ်တပ်ရပ်နေသည့်အနေအထားသည် အစည်းအဝေးများ ပို၍တိုတောင်းနိုင်စေသည့် အသေချာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စကားပြောရန်အချိန်ရပါက ထိုင်၍ အစည်းအဝေးများ လုပ်ကြပါသည်။ ၎င်းသည် နောက်လာမည့်တစ်ခုမတိုင်မီ တစ်ရက် သို့မဟုတ် နောက်လာမည့်တစ်ခုမတိုင်မီ တစ်ပတ်တွင် ထွက်ရှိမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ၎င်း၏မျှော်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်ရန် ရှုမြင်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းခန်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပသည့်ကိစ္စရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သတင်းခန်းအစည်းအဝေးမှာ သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းကော်မတီဖြစ်လာသည့်ကိစ္စရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကဏ္ဍများတွင် စီစဉ်ထားသည့် သတင်းခန်းရှိ အချိန်ဇယားဥပမာ
၉ နာရီ ၃၀ မိနစ် ကဏ္ဍအစည်းအဝေး။ သတင်းစာဆရာအားလုံးအတွက် မဖြစ်မနေပါဝင်ရမှု။ ပါဝင်သူများသည် မတ်တပ်ရပ်၍နေကြပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် တစ်နေ့တာအစီအစဉ်အရ ဆောင်းပါးများအတွက် ၎င်းတို့၏အကြံပြုချက်များကို တင်ပြပါသည်။ အဆိုပြုထားသော စာသားများကို သင်္ကေတများ သို့မဟုတ် အက္ခရာများ၊ လိုင်းများ၊ ကော်လံများ သို့မဟုတ် စာမျက်နှာများအရ မှတ်သားထားပါသည်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ စုစည်းထားသော တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှု၍၊ ကဏ္ဍအယ်ဒီတာသည် ဝန်ထမ်းများကြားတွင် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သူ သို့မဟုတ် သူမသည် သူ သို့မဟုတ် သူ၏အဖွဲ့မှ တင်ပြသော နေ့စဉ်သတင်းစု အပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအတွင်းရှိ နေ့စဉ်သတင်းစု ဥပမာမှာ-
* စာမျက်နှာ ၉-
– ဝန်ကြီးချုပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆိုင်သော နည်းဗျူဟာနှင့်ဆိုင်သော A.R. ၏ အနှစ်ချုပ်- J.P ၏ ပုံရေးဆွဲမှုပါရှိသော ကော်လံ ၂ ခု။
ပါလီမန်လွှတ်တော်နှင့်ဆိုင်သော အများစုအတွင်းရှိ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်မှတ်စု (R.B.) ၁/၂ ကော်လံ။
အောက်လွှတ်တော်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းပေးပို့ချက် (L.Z.) ကော်လံ ၁ ခု။
အထက်လွှတ်တော်၏ မှူးမတ်များလွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (A.G.) ၁ ၁/၂ ကော်လံ။
မျိုးစုံသော သတင်းတိုအကြောင်းအရာများ- ကော်လံ ၁ ခု။
* စာမျက်နှာ ၁၀-
လက်ဝဲအစွန်ရောက်မှ လုပ်ဆောင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက် (A.C.)။ R.D ၏ ဓာတ်ပုံ ၁ ပုံပါရှိသော ကော်လံ ၂ ခု။
Squirrel Liberation Front ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ပုံတူ (A.B.) J.B. ၏ ဓာတ်ပုံပါရှိသော ကော်လံ ၁ ၁/၂ ခု)။
အမျိုးသမီးမဲပေးမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (J.G.) ၁ ၁/၂ ကော်လံ။
သတင်းတိုအကြောင်းအရာများ- ၁/၂ ကော်လံ။
၁၀ နာရီ ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းခန်းအစည်းအဝေး၊ သတင်းစာ ဒါရိုက်တာ၊ သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်း ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် အယ်ဒီတာချုပ်တို့မှ ကြီးမှူးသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကဏ္ဍအားလုံးထံမှ တင်ပြရပါမည်။ ပါဝင်သူများသည် မတ်တပ်ရပ်၍နေကြပါသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ နေ့စဉ်သတင်းစုကို အလှည့်ကျ တင်ပြပါသည်။ ဆွေးနွေးမှုတွင် သတင်းစာ၏ ပြတင်းတံခါးအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ပထမစာမျက်နှာပေါ်တွင် ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြထားသော လက်ရွေးစင်ခေါင်းစီးများနှင့် “ ချိန်ညှိခြင်း” ပြုလုပ်ရန်လိုသည့် ချိန်ညှိဆောင်ရွက်မှုများကို ကန့်သတ်ဆွေးနွေးပါသည်။ အစည်းအဝေးသည် မိနစ် ၂၀ ပင် မကြာပါ။ စာတည်းရုံးခန်းထံ တင်ပြလိုက်သည်နှင့် အဆုံးသတ်သတင်းစု ဖြစ်လာမည့် အထွေထွေသတင်းစု အတည်ပြုချက်။
၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ် ကဏ္ဍတစ်ရပ်စီသည် ၎င်း၏နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိ အထွေထွေသတင်းစုတွင် စာရင်းသွင်းထားသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပေါင်းစည်းပါသည်။
၅ နာရီ ၃၀ မိနစ် ကဏ္ဍတစ်ရပ်စီသည့် နောက်ရက်အတွက် ၎င်း၏ ပဏာမသတင်းစုကို ရေးဆွဲပါသည်။ သတင်းစာဆရာတစ်ဦးစီသည် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏အချိန်ဇယားများကို ကဏ္ဍအယ်ဒီတာထံ တင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် အချိန်ဇယားအားလုံး၏ စာရင်းကို ရေးဆွဲကာ သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပါသည်။
၆ နာရီ ယာယီ သတင်းခန်းအစည်းအဝေး။ ထိုင်လျှက် အစည်းအဝေး။ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကဏ္ဍတစ်ခုစီမှ တင်ပြရပါမည်။ ကဏ္ဍတစ်ရပ်စီသည် နောက်ရက်အတွက် ၎င်း၏ ပဏာမသတင်းစုကို သတ်မှတ်ပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးကို အချိန်ရသည့်အယ်ဒီတာအားလုံး တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ရေးဆွဲနေသည့် အထွေထွေသတင်းစုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးမှု။ ပါဝင်သူများ၏ အလုပ်ပမာဏပေါ်တွင် မူတည်၍ ကြာချိန်မှာ ကွဲပြားပါသည်။
သတင်းခန်းအစည်းအဝေးများအားလုံး၏ ချောမွေ့သောလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အကြံပြုထောက်ခံချက်နှစ်ခုမှာ-
သင်သည် တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေချိန်ထက် အဖွဲ့လိုက်နေစဉ်တွင် ပို၍ထက်မြတ်သည်ကို လုံးဝမမေ့ပါနှင့်။
အမျိုးအစားများကို မရောပစ်ပါနှင့်- သတင်းခန်းအစည်းအဝေးများကို သတင်းစာအကြောင်းအရာအတွက် သီးသန့်ဘေးဖယ်ထားရပါသည်။ (အခြား ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်များ- ကွဲပြားသောထင်မြင်ချက်၊ ပဋိပက္ခများ၊ ဆက်ဆံရေးပြဿနာများ၊ ကုန်သွယ်မှုသမဂ္ဂရေးရာများ၊ စသည်တို့ကို အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်)။
03.၃။ စာနယ်ဇင်းသတင်းလောကမှ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ
04.၄။ သတင်းတင်ပြမှုဆိုင်ရာ ပုံစံများ
08.၈။ အမှန်တရား များနိုင်သမျှများအောင်
11.၁၁။ စာမျက်နှာများ တွဲခြင်း
14.၁၄။ သတင်းရှာဖွေ စုံစမ်းခြင်း
15.၁၅။ အင်တာဗျူးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော နည်းနာနိဿယများ
16.၁၆။ အထွေထွေ သတင်းရေးသားသူများနှင့် ကျွမ်းကျင်အဆင့်သတင်းရေးသားသူများ
18.၁၈။ အကောင်းမွန်ဆုံးသော အရေးအသား
19.၁၉။ စာမူအကြမ်းကို ပြန်လည်ဖတ်ရှု အမှားပြင်ဆင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပရုဖ်ဖတ်ခြင်း
21.၂၁။ စာမျက်နှာ ဆက်တင်ပြုလုပ်ခြင်း
22.၂၂။ သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်သတင်းရုပ်ပုံများ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း
23.၂၃။ သတင်းစာပုံနှိပ် ထုတ်ဝေပြီးသည့်နောက် စာဖတ်ပရိသတ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်း